သူ့ကြော်ငြာတွေဖြုတ်ချခံရပေမယ့် ထိုင်းဘက်ကဝင်ငွေတွေကို သိသွားရင်ရူးသွားလမ့်မယ့်လို့ ကြွားလုံးထုတ်လာတဲ့ ဆယ်လီ နေဆန်း… – Cele Oscar
June 25, 2021 By L YC News
ဖစျေ့ဘုတျ ဆယျလီ နဆေနျးကတော့ သူမြား နဲ့ မတူ တမူ ထူးခွားတဲ့ ဟာသလေးတှေ တငျဆကျရငျး လူသိမြားလာခဲ့တဲ့ သူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။လှပတဲ့မကျြနှာအမူအရာ အပွောအဆိုတှကွေောငျ့ လူအမြားရဲ့အားပေးမှုကို… ပိုငျဆိုငျထားသူ တဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ..ထို့ပွငျ နဆေနျးက ပရိသတျ တှေ အားပေးမှုကွောငျ့ ..ရရှိလာ ခဲ့တဲ့ ဝငျငှေ မြားဖွငျ့ ..သိနျးထောငျ ခြီ တနျသော အိမျ ကောငျးကောငျး မှနျမှနျ ဆောကျလုပျ နထေိုငျ လာနိုငျလာခဲ့ပါတယျ။နဆေနျးက လကျရှိမှာတော့ သူဝါသနာပါတဲ့ အလုပျတှကေို လုပျကိုငျရငျး ပရိသတျတှေ ရဲ့ အားပေးမှု့ ကို ရရှိကာ အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိ ဆှတျခူးနပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ။နဆေနျးက လညျး သူ့ရဲ့အလုပျကို အာဏာ သိမျးခံထားရ ခြိနျတောငျ မှမနားပဲ ကွိုးကွိုး စားစားနဲ့ လုပျကိုငျ နလေကျြရှိပါတယျ။နဆေနျးဟာ အာဏာသိမျး ခံထားရ တာတောငျမှ ဂရုမစိုကျပဲ အလုပျတှေ ဆကျလကျ လုပျဆောငျနေ တာကွောငျ့ ပွညျသူမြား ရဲ့ အပွဈတငျ ဝဖေနျမှုကိုလဲ အပွငျးအထနျ ခံနရေပါတယျ။
မကွာသေး မှီကပဲ နဆေနျး နှငျ့ ပတျသတျ သညျ့ ကွျောငွာ မြားရိုကျကူးထား သညျ့ လုပျငနျးရှငျ မြားက ပရိတျသတျ မြားတောငျးဆိုခကျြ အရ နဆေနျးနှငျ့ရိုကျကူးခဲ့သညျ့ ကွျောငွာမြား ပိုစတာ မြားကို ဖကျြခဲ့ ပေးပွီး ဖွဈကွောငျးတောငျးပနျစာ မြားရေးသားခဲ့ကွပါသညျ။ နဆေနျးအပါအဝငျ ဖွူဖွူထှေး ဟာလညျး ယနညေတှငျ ကွျောငွာမြား ဖွုတျခခြံ ခဲ့ရပါတယျ။နဆေနျးဟာ ယခုသူရဲ့ အကောငျ့ My days မှာ ပွညျသူမြားကို ကြေးဇူးကနျးသော စာသားမြား ကို တငျထားတာတှရေ့ပျတယျ သူတငျထားတဲ့ စာတှကေတော့
“အျော ပြျောနေ လိုကျကွတာ ထိုငျးဘကျ မှာ ငါငှတှေေ ဘယျလို ငှတှေေ ဝငျနလေဲ ဆိုတာ သိသှားရငျ ရူးသှားမယျ…ဒီလို ဝဖေနျမှု့တှေ ကွောငျ့ အလုပျလုပျဖို့ မပငျြးတော့ဘူး။ ညဘကျ ထိုငျးဘကျ က အလုပျ လာအပျတာ သိနျး 100 ကြျော”…ထို့အပွငျ နဆေနျးက မွနျမာတှေ အားမပေး လဲ ..ထိုငျးဘကျ က ပရိသတျမြားနဲ့… ထိုငျးရောကျ မွနျမာ ပရိသတျတှေ အခိုငျမာ ရှိကွောငျး သူတို့နဲ့ပဲ အလုပျဆကျလုပျသှားမညျ ဖွဈကွောငျးကို အောကျပါအတိုငျး ဖျောထုတျ ရေးသားခဲ့ပါတယျ… သူရေးသားခဲ့တာကတော့
ထိုငျးဘကျမှာ Video တငျဖို့ သိနျးထောငျခြီတနျ စာခြုပျမြား ခြုပျလိုကျပွီး ထိုငျးသူဌေးမတှေ ရော သူ့အားပေးတဲ့ ထိုငျးက ပရိသတျမြားကိုလဲ ကြေးဇူးတငျစကားပွောခဲ့ပါတယျ။ ဒါတငျမကသေးပဲ…. ဝဖေနျသူမြား ဆှေ့ ဆှခေု့နျသှားအောငျ သူ TikTok ဆော့ဖို့ရယျ Vide ရိုကျကူးဖို့ အတှကျ‌နောကျထကျ …သိနျး4000 တနျဖိုးရှိသော အလုပျ အိမျ အသဈ တလုံး ဆောကျနကွေောငျးကိုလဲ တဈခါထဲ ထုတျဖျော ရေးသားခဲ့တာပါနျော။နဆေနျးအပျေါအမွငျလေးကိုလညျး မြှဝခေဲ့ကွပါအုနျးနျော။
ဖေ့စ်ဘုတ် ဆယ်လီ နေဆန်းကတော့ သူများ နဲ့ မတူ တမူ ထူးခြားတဲ့ ဟာသလေးတွေ တင်ဆက်ရင်း လူသိများလာခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လှပတဲ့မျက်နှာအမူအရာ အပြောအဆိုတွေကြောင့် လူအများရဲ့အားပေးမှုကို… ပိုင်ဆိုင်ထားသူ တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ..ထို့ပြင် နေဆန်းက ပရိသတ် တွေ အားပေးမှုကြောင့် ..ရရှိလာ ခဲ့တဲ့ ဝင်ငွေ များဖြင့် ..သိန်းထောင် ချီ တန်သော အိမ် ကောင်းကောင်း မွန်မွန် ဆောက်လုပ် နေထိုင် လာနိုင်လာခဲ့ပါတယ်။နေဆန်းက လက်ရှိမှာတော့ သူဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ရင်း ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေးမှု့ ကို ရရှိကာ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိ ဆွတ်ခူးနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းက လည်း သူ့ရဲ့အလုပ်ကို အာဏာ သိမ်းခံထားရ ချိန်တောင် မှမနားပဲ ကြိုးကြိုး စားစားနဲ့ လုပ်ကိုင် နေလျက်ရှိပါတယ်။နေဆန်းဟာ အာဏာသိမ်း ခံထားရ တာတောင်မှ ဂရုမစိုက်ပဲ အလုပ်တွေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေ တာကြောင့် ပြည်သူများ ရဲ့ အပြစ်တင် ဝေဖန်မှုကိုလဲ အပြင်းအထန် ခံနေရပါတယ်။
မကြာသေး မှီကပဲ နေဆန်း နှင့် ပတ်သတ် သည့် ကြော်ငြာ များရိုက်ကူးထား သည့် လုပ်ငန်းရှင် များက ပရိတ်သတ် များတောင်းဆိုချက် အရ နေဆန်းနှင့်ရိုက်ကူးခဲ့သည့် ကြော်ငြာများ ပိုစတာ များကို ဖျက်ခဲ့ ပေးပြီး ဖြစ်ကြောင်းတောင်းပန်စာ များရေးသားခဲ့ကြပါသည်။ နေဆန်းအပါအဝင် ဖြူဖြူထွေး ဟာလည်း ယနေညတွင် ကြော်ငြာများ ဖြုတ်ချခံ ခဲ့ရပါတယ်။နေဆန်းဟာ ယခုသူရဲ့ အကောင့် My days မှာ ပြည်သူများကို ကျေးဇူးကန်းသော စာသားများ ကို တင်ထားတာတွေ့ရပ်တယ် သူတင်ထားတဲ့ စာတွေကတော့
“အော် ပျော်နေ လိုက်ကြတာ ထိုင်းဘက် မှာ ငါငွေတွေ ဘယ်လို ငွေတွေ ဝင်နေလဲ ဆိုတာ သိသွားရင် ရူးသွားမယ်…ဒီလို ဝေဖန်မှု့တွေ ကြောင့် အလုပ်လုပ်ဖို့ မပျင်းတော့ဘူး။ ညဘက် ထိုင်းဘက် က အလုပ် လာအပ်တာ သိန်း 100 ကျော်”…ထို့အပြင် နေဆန်းက မြန်မာတွေ အားမပေး လဲ ..ထိုင်းဘက် က ပရိသတ်များနဲ့… ထိုင်းရောက် မြန်မာ ပရိသတ်တွေ အခိုင်မာ ရှိကြောင်း သူတို့နဲ့ပဲ အလုပ်ဆက်လုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ထုတ် ရေးသားခဲ့ပါတယ်… သူရေးသားခဲ့တာကတော့
ထိုင်းဘက်မှာ Video တင်ဖို့ သိန်းထောင်ချီတန် စာချုပ်များ ချုပ်လိုက်ပြီး ထိုင်းသူဌေးမတွေ ရော သူ့အားပေးတဲ့ ထိုင်းက ပရိသတ်များကိုလဲ ကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပဲ…. ဝေဖန်သူများ ဆွေ့ ဆွေ့ခုန်သွားအောင် သူ TikTok ဆော့ဖို့ရယ် Vide ရိုက်ကူးဖို့ အတွက်‌နောက်ထက် …သိန်း4000 တန်ဖိုးရှိသော အလုပ် အိမ် အသစ် တလုံး ဆောက်နေကြောင်းကိုလဲ တစ်ခါထဲ ထုတ်ဖော် ရေးသားခဲ့တာပါနော်။နေဆန်းအပေါ်အမြင်လေးကိုလည်း မျှဝေခဲ့ကြပါအုန်းနော်။
မိခင်တစ်ယောက်က သားလေးအတွက် ဘယ်တုန်းကမမမျှော်လင့်ထားတဲ့ နောက်ဆုံးရေးတဲ့စာလေး….